degmada isku-shuban dood ka taagan Geed deegaankaas ku yaala oo 300 sano ah halkaa ku yaallay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii degmada isku-shuban dood ka taagan Geed deegaankaas ku yaala oo 300...
degmada isku-shuban dood ka taagan Geed deegaankaas ku yaala oo 300 sano ah halkaa ku yaallay
Deegannada Puntland, gaar ahaan degmada isku-shuban, waxay dood ka taagan tahay geed caan ka ah deegaankaas oo sida la sheegay muddo 300 oo sano ah halkaa ku yaallay oo dhawaan la jaray.
Geedkan ayaa la sheegayaa in manaafacaad badan uu u lahaa xoolaha iyo dadka deegaanka oo har iyo hunguriba ka heli jiray muddadii uu halkaasi ku yaalay, balse waxaa jaray nin lagu eedeeyay in uu dhuxul doon ahaa, kaas oo xabsiga la dhigay.
“Geedka magaciisa waxaa la yiraahdaa Canjeel, meel lagu magacaabo Balli-Jarmaale weeye meesha laga jaray geedkaas magacyo caan ah buu leeyahay, waxaa ka mid ah ‘Saynab lagu fur’ oo ku baxay mar lagu furay gabar lagu magacaabo Seynaab. Harweyne waa la yiraahdaa, maadama ay dadku harsadaan,” ayuu yiri Dr. Cabdirisaaq Maxamed Cali Bogcad oo ah xeel-dheere ku takhasusay arrimaha deegaanka.
Cabdirisaaq wuxuu BBC-da u sheegay in geedkan uu ahaa mid dadka deegaanka ay ku qabsan jireen munaasabadah sida Alle bariga isla markaana uu ahaa geed taariikh weyn ku leh deegaanka.
“Dadka reer miyiga, xilligga barwaaqada intey yimaaddaan oo ay aaggiisa dhinaca dooxada soo degaan oo xoola ku qashaan bey halkaa ku sameysan jireen siyaarada iyo rabi bariga, odeeyaashii aan wareysanay waxay inoo sheegeen inta xog ogaal loo yahay in geedka ugu yaraan jiray 300 sano”.
Wuxuu sidoo kale sheegay in jarista geedka uu argagax ku reebay dadka deegaanka “Waa geed cajaa’ib ah oo taariikh leh dadkuna wey qaracmeen, ninkii jarayna wuu xiran yahay.”
Geedkan la jaray wuxuu daadin jiray miro aad fara badan oo dadka iyo duunyada ay ku tiirsanayeen xillyada jiilaalka.
“Miro aad u badan buu daadiya xilliyada abaarta mirihiisana waa la karsan jiray. Wuxuu ahaa geed lagu baxsado xiilliyada abaarta geedka canjeelka”.
Guddoomiye ku xigeenka degmada Isku Shuban, Axmed Jaamac Aadan, wuxuu BBC Somali u sheegay in geedka ay jareen dad dhuxusha ka shaqeeya oo xaafulin ku haya deegaanka.
Maxaa loo hadal hayaa geedkan?
Geedkan loo garanayo Canjeelka wuxuu ka baxaa gobolka Bari, gaar ahaan dooxooyinka ama togagga, haddaba muxuu kaga duwanaa geedaha kale?
Dr Cabdirisaaq wuxuu sheegayaa in geedkan uu keligiis ku yaallay meel dooxo ah, sidaas darteed ay adag tahay in si dhakhso uu ku soo baxo kuna waydaano haddii xilligan la beero.
“Geed intii la beero si sahlan u soo baxayo ma ahan. Laakiin geedka canjeelka intan soo qaado oo aan beero aniga iyo wiilkeyga iyo wiilkiisa, midna harsan maayaan. Waa geed boqollaal sano ku baxa, geed ciyaar ciyaar ah ma ahan, geedaha kalena lamid aha,” ayuu yiri Dr. Cabdirasaaq.
Wuxuu leeyahay dhuux duleela. Waa geed ka duwan geedaha kale, ma lahan laamo is heysta waa lakab-lakab
“Geedkan gudihiisa ilmaha yar yar ayaa geli kara, waa dhuux iska duleela, dhuxul lagama shidi karo,” ayuu yiri Dr Cabdirisaaq.
Previous articleQaramada Midoobay Oo Soomaaliya Ugu Deeqday Malaayiin Doollar.
Next articleOrodyahanka u dhashay Britain balse asal ahaan Soomaali ah Mo Farah oo loo magacaabay safiirka Waaxda Dekadaha iyo Aaagagga Xorta ah ee Jabuuti
Wasiir Bayle oo labo qodob kala hadlay wasiirada maaliyadda ee maamul...
Ra iisal wasaaraha Cusub oo codsi ugu horeeyey soo diray yuusa...